SomaliTalk.com » Dastuurka Qabyada ah ma laga saari doonaa qodobka Muranka Gelinaya Dhulka Soomaaliya, ka hor inta aan la ansixin?
Waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirkii ergeyda ansixinta dastuurka qabyada ah ee la doonayo in loo sameeyo Soomaaliya. Waxaana warar laga helayo goobta shirku ka socdo ay tibaaxayaan in ay weli socdaan doodda sidii wax looga bedeli lahaa qodobbo aan u cuntamayn ummadda Soomaaliyeed.
Qododobka 7aad oo ku saabsan Dhulka Soomaaliya – Farqaddiisa 3aad waxay dhigaysaa in: Dhulka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ee khilaafaadka soohdimaha caalamiga ka dhasha in xallintooda loo maro tub nabadeed iyo iskaashi waafaqsan qawaaniinta Dalka u degsan iyo kuwa Caalamiga ah..
Qodobkaas oo layaab leh waxa uu si qayaxan ugu gogol dhigayaa in dhulka Soomaaliyeed muran la gelin karo ama Soomaalida dhulkeeda lagu qabsan karo oo ay tahay in markaas ay wada xaajood ka galaan dhulkooda.
Waa qodob u dhigma: Gurigaaga muran ayaa la gelin karaa, haddii lagugu qabsadona wada xaajood ayaad ka geli karaa. Taas oo ah mid aan la qaadan karin.
Qodobkaas ku saabsan dhulka Soomaaliya iyo qodobo kale oo hore si weyn loo faahfaahiyey (eeg linkiyada hoose), sida in shuruudaha madaxweynaha Soomaaliya loo dooraanayo aysan ku jirin in uu ahaado Muslim, ayaan weli cadayn in wax laga bedeli doono ka hor inta aan la ansixin dastuurka qabyada ah.
Haddaba, haddii dastuurkaas sida uu yahay lagu ansixiyo ayadoo aan wax laga bedelin qodobada aan u cuntamayn ummadda Soomaaliyeed waxa uu noqonayaa dastuurkii ugu khatarsanaa ee soo wajahay ummadda Soomaaliyeed, kaas oo ku biiraya tacadiyadii soo maray Soomaaliya 21-kii sano ee ugu dambeeyey iyo weliba jajuubka iyo garbaduubka ay kooxo yari ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ee ay soo wajahdey macaluusha, jahliga, iyo coladda.
Dastuurkan qabyada ah ayaa lagu bixiyey malaayiin doolar, kharash joogto ah iyo boqollaal qof oo la isu keenay oo ay ku baxayso kharash ilaa hadda socda, halka ay ahayd in lacagtaas cunto lagu siiyo kumanaanka Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan duleedka Muqdisho oo ay ku hayso gaajada iyo dhaxanta iyo in dugsiyo loogu dhiso carruurto ku koreysa waxbarasho la’aanta.
July 29, 2012: Hay’adda Culumada Soomaaliyeed oo Ergada uga Digtay in ay Ansixiyaan Dastuurka Qabyada Maadaama Qodobo ka mid ah ay Diinta ka hor imaanayaan
– Qodabada Xasaasiga ah ee ku Jira Dastuurka ee ay sida weyn uga Horyimaadeen Odoyaasha Dhaqanka iyo Aqoonyahanada
– Dastuurka Qabyada ee Cusub oo Shuruudaha Madaxweynaha aysan ku jirin in uu ahaado Muslim
Halku dhegga Maanta:
Qoraallo hore ee Dastuurka: http://somalitalk.com/2010/08/26/dastuur/
Kaydka Dastuuradii Soomaaliya
2007 (Baydhabo – Tarjumaada Dastuurkii 1960):